Archive du 20170105
Lalao Ravalomanana �Hiasa miaraka amin'ny rehetra isika�
Niarahaba ny Ben�ny tan�nan�ny kaominina Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana nahatratra ny taona vaovao 2017 ny filan-kevitra monisipaly sy ny ao amin�ny kabinetran�ny Ben�ny tan�na omaly
Mpitondra sy mpanao politika Manao taon-dasa tsy tsaroana
Naka lesona tamin�ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 lasa tetezamitatra hatramin�ny taona 2013 ny fiaraha-monina Malagasy.
Taorian�ny Karana sy ny Sinoa Hanao afera eto koa ny Tiorka
Efa tena tsy misy atokona intsony mihitsy ve i Madagasikara ka tsy miasa saina firy intsony ny mpitondra fa izay rehetra milaza fa manam-bola dia iaraha-miasa daholo na inona na inona mety ho takalon�izany vola be izany.mampieritreritra ny fandrenesana fa ho avy eto Madagasikara
Rajaonarimampianina Nampitandrina ireo fonksionera kamo miasa
Farafangana no faritra voalohany notsidihan�ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin�ity taona 2017 ity.Tany an-toerana izy omaly ary nahazo ny tso-drano sy ny fanohanan�ireo Ampanjaka avy amin�ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny faritra Atsimo atsinanana
Kaominina Anosizato Andrefana Hijery manokana ny resaka fananantany
Olana iray sendrain�ny kaominina Anosizato Andrefana amin�izao fotoana izao ny faharovitan�ny boky momba ny tany eo anivon�ny sampandraharahan�ny fananantany ka tsy hahafahan�ny ankamaroan�ny mponina maka �certificat juridique� rehefa misy taratasy karakaraina raha araka ny fanazavan�ny Ben�ny tan�na Andriambololona Laurence.
Sady jamba no marenina ve e ?
Miarahaba jean .Tena tsy fombako ry jean ny hoe mihinana amam-bolony amin�izay resaka reko etsy sy eroa isan�andro ka izany no antony hanoratako matetika aty aminao e
Minisiteran�ny fanabeazana Hanaramaso akaiky mpampianatra matoatoa
Hiompana amin�ny fitsirihana manokana irony antsoina hoe mpiasa matoatoa irony ny tetikasan�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena amin�ity taona ity, raha ny fanazavan�ny minisitra Paul Rabary, tetsy amin�ny biraony tetsy Ampefiloha omaly.
Kaominina Ivato Tsy tan�nan�ny pesta intsony
Nahatsiaro manokana ireo zokiolona sy fianakaviana sahirana ara-pivelomana omaly ny fiadidiana ny kaominina ambanivohitra Ivato tarihan�ny ben�ny tan�na Randrianarisoa Penjy.
Lozam-pifampivoizana etsy sy eroa Ny toe-tsain�ny mpamily mihitsy no mila miova
Nifanesisesy sahady tato ho ato ny lozam-pifamoivoizana na dia vao miandoha aza ny taona.
Vondrom-pinoana AMCM Nihaona tamin�i Honore Rakotomanana
Tonga nitsidika ny Filohan�ny Antenimierandoholona tetsy Anosikely, omaly maraina, ny vondrom-pikambanana ara-pinoana AMCM na ny � Amical des Musulmans et Chretiens de Madagascar � izay tarihin� Andriamatoa isany Hamada Chanfi, ho an�ny Silamo sy Rabeson Rafaralahibe kosa ho an�ny Krisitiana.
Hiray latabatra fa tsy hiray saina?
Nivalona tanteraka ny fetin�ny asaramanitra niraisan�ny sarambabem-bahoaka ary miverina tsikelikely amin�ny fiainana andavanandro ny isan-tokantrano. Ankoatra ny fety niraisan�ny rehetra anefa,